နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး )မှ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများကို ပထမအကြိမ်ဘွဲ့ပေးအပ်မည်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး )ကို ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၉)ရက်နေ့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ နှင့် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့များ ချီးမြင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး )သည် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ မီယာဆာကီ တက္ကသိုလ်နှင့် မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့အတွက် Double Degree Program ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ အစီစဉ်ဖြင့် ဂျပန်ကျောင်းသား/သူ (၃)ဦးသည် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊မတ်လအထိ မဟာအင်ဂျင်နီယာ သုတေသနကျမ်းများ လာရောက်ပြုစုခဲ့ပြီး ယခု တတိယအကြိမ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် မဟာဘွဲ့ တက်ရောက်ယူကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Double Degree Program အရ မဟာဘွဲ့နှစ်ခုရရှိနိုင်ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး )မှ ကျောင်းသား/သူ (၁၂)ဦးသည်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ မီယာဆာကီ တက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်သောဘွဲ့ ရရှိပြီးဖြစ်ကာ ယခုပညာသင်နှစ်တွင် (၃)ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
University Of Technology (Yatanarpon Cyber City) Will Give Graduation To Abroad Students For The First Time
University Of Technology (Yatanarpon Cyber City) was initially established in 2011. In this year,the 3rd time convocation ceremony will be held on February 9th,2019 and Bachelor of Engineering Degrees and Master of Engineering Degrees will be awarded.
University Of Technology (Yatanarpon Cyber City) is cooperating with international universities and according to the Double Degree Program with Miyazaki University of Japan, three students of Japan was doing thesis for Master Degree from December,2015 to March,2017 and they will receive Master Degrees in this 3rd convocation of UTYCC.
According to the Double Degree Program,a student can receive two degrees and twelve students of the University of Technology (Yatanarpon Cyber City) have already received degrees from the Miyazaki University.Three of our students are currently attending there in this acedemic year.